दशरथ रङ्गशाला - विकिपिडिया
(दशरथ रंगशाला बाट पठाईएको)
दशरथ रंगशाला सन् २००८ मा
निर्देशाङ्कहरू: २७°४१′४२″N ८५°१८′५३″E﻿ / ﻿२७.६९५०५२°N ८५.३१४८३५°E﻿ / 27.695052; 85.314835
१९९८, २०११, २०१४
नेपाल व्यावसायिक आर्किटेक्चर
१.१ पहिलो चरण
१.२ दोस्रो चरण
१.३ आधुनिकिकरणको चरण
१.४ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने चरण
१.५ अहिलेको स्वरूप
२ रोचक किम्बदन्ति
२.१ मसानघाट थियो पहिलेको रंगशाला
दशरथ रंगशाला निमार्णको इतिहास ५३ वर्ष लामो छ। र अझ पनि यो आधुनिकीकरणको पर्खाइमा छ।
हतारमा तयार पारीएकोले पहिलो रंगशालाको खेल मैदानको लेबल राम्रो थिएन। मैदानमा घाँस पनि थिएन। खाल्डोलाई माटोले सम्माएर मैदान तयार पारिएको थियो। प्रतियोगिताको दिन धुलो उड्ने डरले सधै पानी छर्किने गरिन्थ्यो। "खेल भइरहेको बेला धुलो उडेर विजोग भएको थियो" राज्यभिषेक कपमा एथ्लेटिक्सतर्फ भाग लिएका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेप का पूर्व सदस्य-सचिव राजबहादुर सि‌ह पुरानो कुरा सम्झदैँ भन्छन्। उनका अनुसार यही प्रतियोगितामा पहिलो पल्ट 'फ्लड लाईट'को प्रयोग भएको थियो। "बिजुली अफिसबाट लाईट झिकाएर बत्तिमा फुटबल म्याच खेलाईएको थियो" उनी भन्छन्। त्यतिबेला फुटबल ६० मिनेट खेलिएको थियो।
आधुनिकिकरणको चरण[सम्पादन गर्ने]
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने चरण[सम्पादन गर्ने]
अहिलेको स्वरूप[सम्पादन गर्ने]
दशरथ रंगशालामा भएको २०१३ साफ च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेल
दशरथ रंगशालाको हालको स्वरूप भने २०५५ सालमा तयार भएको हो। नेपालले आठौ साफ आयोजना गर्ने निर्णय भएलगत्तै चीन सरकारले आधुनिक रंगशाला निमार्णका लागि पुनः सहयोग गर् यो। आठौ साफ कै सन्दर्भमा रंगशालामा 'फर्ड लाईट' र स्कोर बोर्ड थपियो। यस्तै दर्शकहरू सहजै मैदानमा झिर्न नपाउनु भन्ने उद्देश्यले प्याराफिटको तलको तीन लेन फुटाइयो। प्याराफिट रेलिङले घेर्ने काम पनि भयो। पानीबाट प्रभाव नपर्ने 'वाटर प्रुफ' पेन्ट पुरै रंगशालामा लगाउनेलगायत पहिलो पल्ट ८ लेनको सेन्थेटिक ट्रयाकको पनि पुनः निमार्ण सम्पन्न गरियो।
रोचक किम्बदन्ति[सम्पादन गर्ने]
मसानघाट थियो पहिलेको रंगशाला[सम्पादन गर्ने]
हलचोक रंगशाला, हलचोक
↑ नवीन अर्याल. शनिवार, 18 जूलाई 2009. कसरी बन्यो दशरथ रंगशाला ? नगरिक न्युज
एन्फा कम्प्लेक्स हल
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=दशरथ_रङ्गशाला&oldid=967170" बाट अनुप्रेषित